Sidee in ay ka saarto tus ka Lugood
Degsado files ka Lugood inta badan u abuuraa farabadan oo tus aan la rabin in maktabadda Lugood ah. Maktabaddu waxay ka sii culus oo bulkier noqotaa marka faylasha waxaa laga soo wareejiyay mid qalab in kale. Files labalaabka abuuraan buuq ah sababta oo ah waxay mashquulin meel aan loo baahnayn, adkayn baadhi ee files ah, oo mararka qaarkood aad aakhirka ciyaaro ee kuwan raadkaygay isku celcelis ah. Dadka isticmaalaya Lugood v11 ama edition dambe ee Lugood caadi saarto tus ku Lugood iyadoo la isticmaalayo habka hal-click ah.
Qaybta I. Gacanta saar tus Music Faylal ay ku Lugood Music Libray
Qaybta II. Saar tus Music Faylal ay ku Lugood Libray toos ah
Qeybta III. Sida loo saar tus Music Faylal ay ku Lugood Libray la TunesGo
Burcad Lugood ku saabsan qalabka Mac ama PC (isagoo ka hor lagu rakibay-Lugood).
Tuubada View menu ka bar menu.
Dooro Show nuqul Item ka menu soo bandhigay.
Marka Lugood bandhigayaa dhammaan faylasha iyo tus ay kuwa badbaadaya in aad maktabadda, in meesha laga saaro mid file waqti, xaq-riix faylka dooro Delete ka menu macnaha guud.
Haddii aad rabto in aad ka saarto files kala duwan ee hal go, hoos iyo hay badhanka amarka (ku saabsan qalabka Mac) ama Ctrl (aad kombuutarka Windows), oo guji in ay doortaan faylasha rabin hal-by-ka mid ah.
Ka dib oo dhan files rabin lagu doorto, xaq-riix mid ka mid ah files xulay dooro Delete ka menu xaaladda.
Haddii kale sidoo kale waxaad tirtiri kartaa faylasha xulay iyaga si toos ah u soo jiiday in qashinka karaa ama Recycle Bin icon.
Fiiro gaar ah : Haddii aad doorato u sii File doorasho, oo dhan files xushay laga saaro maktabadda Lugood, laakiin waxay ku sii jiri wadid aad u adag.
• files takhalusid hal-by-mid gacanta waa waqti lumis iyo waajib ah in qaladaad aadanaha.
• Xitaa markii la tirtiro files duwan oo isku mar, tan waxaa looga baahan yahay in aad dooratid faylasha gacanta, qalmay weyn oo ah in aad ka boodo kartaa kuwa aan la rabin yar mararka qaarkood .
• Lugood mararka qaarkood ka heli kartaa ka dhex files kala duwan in ay leeyihiin magacyo la mid ah marka aad dooro qasan Items Show nuqul doorasho.
• Waa hab xanibayo haddii aad leedahay maktabad weyn qalabka aad.
Waxaa jira codsiyo badan oo laga heli karo internet-ka in uu abaabulo Lugood aad si hufan ay u suuro-aad nadiifiso maktabadda Lugood weyn iyadoo la fogeynayo faylasha nuqul. Mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo si weyn lagu talinayaa iyaga ka mid ah waa TunesGo by Wondershare. Barnaamijka ayaa laga heli karaa website-ka rasmiga ah ee Wondershare. Codsiga waa mid aad u xoog badan, sax ah, oo ka yar waqti lumis marka ay timaado si dhakhso ah oo sahlan tirka files nuqul.
Wondershare TunesGo waa software ah oo awood aad si ay u maareeyaan files warbaahinta kaydiyaa qalabka Apple aad, oo kuu ogolaanaya inaad si ay ula wadaagaan files ka mid qalab si kale oo aan haysan si ay u isticmaalaan Lugood.
• Wuxuu ka caawiyaa in aad maamusho dhammaan warbaahinta oo ku saabsan mid ka mid ah macruufka qalabka sida iPod, iPad, ama iPhone aad.
• Kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan warbaahinta u dhexeeya iyo Lugood 'iDevices'.
• kuu saamaxayaa inaad sameyso video iyo music beddelaad ee telefoonada Apple iyo aaladaha kale ee Apple.
• Ma qabanqaabiyaha wax ku ool ah music in sidoo kale kaa caawinaysaa in aad la abuuro playlists aad kartoo.
• Synchronizes aaladaha Apple la computer kasta oo kale in uu leeyahay Lugood rakibay waxa ku jira.
• Ka dhig qaybsiga sawir dhexeeya macruufka qalabka iyo hawl yar computer aad.
• aad u saamaxaaya in ay tirtirto waxyaabaha nuqul si fudud ka Lugood rakibay qalab aad.
• Kuu ogolaanayaa inaad dib dhan files muhiim on your computer.
• midowdo karaa xiriirada nuqul khasaara ah mid ka mid ah macluumaadka ku saabsan iPhone.
• Wuxuu ka caawiyaa in aad si fudud u maareeyaan xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah ee iPhone aad oo aan haysan si ay u isticmaalaan Lugood.
Qaybta III. Sida loo saar tus Music Faylal ay ku Lugood Libray la TunesGo
Si aad u tirtirto files nuqul isticmaalaya TunesGo Wondershare:
Download iyo rakibi TunesGo Wondershare aad kombuutarka Mac:
Marka lagu rakibay, software si toos ah syncs la Lugood oo la pre-rakibay qalab aad.
Sida ugu dhakhsaha badan TunesGo Wondershare waxaa synched, iyo liis ay ku qoran oo dhan kuwan raadkaygay nuqul ahbaa, ka qaybta midig ee interface ah, guji songs nuqul ka fursadaha soo bandhigay.
Sida codsigaaga bandhigayaa dhan files nuqul kaydiyaa maktabadda Lugood aad, hubi checkboxes matalaya files in aad rabto in aad tirtirto.
Guji ee Clear All button ka geeska sare ee midigta ee suuqa.
Riix OK ee Su'aal sanduuqa xaqiijin.
Marka sameeyo, waxaad bilaabi kartaa adiga oo isticmaalaya maktabad cusub nafis in aanay ku jirin tus kasta.
> Resource > Lugood > Sida loo saar tus ka Lugood